Famelezana radio shuttle
Iray karazana vahaolana vaovao fitehirizana ny rakotra fandefasana radio Ity rafitra ity dia misy forklift, rafi-pitaterana ary shuttle. Forklift mitondra entana mankany amin'ny seranana.
Ny sambo dia mitondra ny entana ho ao anaty rafi-pitaterana ary ho tonga tokoa ny fitehirizana. Ny radio shuttle dia afaka miasa tsy tapaka ka manatsara ny fahombiazan'ny asa manontolo. Azo averina mihoatra ny in-1000 ny seranana.
◆ Mba hampitomboana ny toerana fitahirizana
◆ Mba hahamendrika azy kokoa amin'ny rafitra Drive-through mahazatra
◆ hampihena ny vidin'ny asa
◆ Mba hanatsarana ny marina amin'ny fifehezana
◆ Famolavolana sary 3D maimaim-poana
Manome onjam-peo amin'ny alàlan'ny radio izahay 2021, efitrano malalaka sy efitrano mangatsiaka misy fiantohana kalitao 1 taona. Izahay dia manokan-tena amin'ny saha fitahirizana trano fitahirizana mandritra ny 25 taona. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina.
Fandefasana onjam-peo amin'ny alàlan'ny radio 2021 avo lenta sy efitrano mangatsiaka misy mari-pahaizana SGS.BV sy TUV
1.Product fampidirana ny fampielezam-peo amin'ny radio
Ny fampielezam-peo amin'ny radio Hegerls dia fomba fitehirizana avo lenta. Mety ho voalohany amin'ny voalohany na voalohany amin'ny farany. Tsy mila lalantsara be loatra ary mety hampiakatra ny toeram-pivarotana 50%.
Haben'ny paleta Fampidinana ara-nofo Loko Bolt & voanjo
1200 * 1000 1500kgs SS400 RAL5005 / RAL2004 tafiditra
3.1. Manana ny patantinay manokana momba ny fandefasana radio izahay.
3.2 Ny fitetezana radio dia fomba fitehirizana avo lenta. ny fampiasana ny gorodon'ny trano fitahirizana dia mitombo 40% raha oharina amin'ny fametahana paleta mifantina nentim-paharazana.
Ny rakotra radio radio Hegerls 3.3 dia azo ampiasaina amin'ny trano fanatobiana entana sy ny efitrano mangatsiaka. Ny maripana minus dia mety ho 25 degre.
4.Ny antsipirian'ny famokarana ny familiana ny radio
4.1 Ny loko dia azo namboarina. Manana loko mainty sy maitso ary mavo izahay.
4.2 Ny haben'ny paleta dia mety ho W1200 * D1000, W1200 * D1200, W1100 * D1100, ny mavesatra farany an'ny paleta tsirairay dia mety ho 1500kgs.
4.3 asa lehibe 5
Fampidirana, famoahana, fampidirana tsy tapaka, famoahana tsy tapaka, lisitra, famindrana pallet.
4.4 fitaovana miaraka amin'ny mekanisma fananganana patanty manokana, mahomby kokoa, fitsitsiana herinaratra bebe kokoa
4.5 amin'ny alàlan'ny famoretana alika any ambadiky ny sensor photoelectric, afaka mamantatra ireo zavatra miloko mainty sy fotsy, ny fomba fametrahana manokana dia afaka mamantatra ilay fitoeran-plastika misy lavaka
4.6 Components self detection function, raha vao misy singa tsy fahombiazana na simba, dia ho hita eo ho eo ilay fitaovana sy hanaitra; rafitra fahaiza-manohitra fanelingelenana, amin'ny fitaomana tontolo iainana mbola afaka mamita tsara ny karazana asa rehetra
4.7 Tongava fenitra miaraka amin'ny lahasa fanisam-bokatra, amin'ny alàlan'ny fampisehoana an-toerana lavitra sy vokatra statistika mety, ny isan'ny fantsona tsirairay, ary ny fanohanana ny lisitra mitohy.
4.8 Famolavolana mari-pana ambany tanteraka: ny rafitra dia mampiasa endrika tsy dia mihena amin'ny maripana ambany, miaraka amin'ny fiasa hamandoana, ary tsy misy fitaovana fanafanana, afaka miasa amin'ny hafanana ambany -25 degre, ny fahatokisana 100%
4.9 Fitaovana ao anatin'ny faritra fanodinana ny masinina dia mampiasa plastika nikela, tsy vitan'ny fiarovana ny harafesina sy harafesina, indrindra ho an'ny indostrian'ny sakafo
4.10 Miaraka amin'ny bateria fosfat vy lithium lehibe, tsy misy vokany fahatsiarovana, fiainana lava sy filaminana tsara, ny isan'ny famoahana hatramin'ny 1000 heny
4.11 Kodiarana polyurethane, tabataba ambany, fanoherana
Teo aloha: HEGERLS fametahana cantilever
Manaraka: Rafitra fitehirizam-bokatra fitehirizana trano avo lenta
Rafitra mpihazakazaka Pallet